काठमाडौंबाट मतगणना अपडेट लिंदै भट्टराई र श्रेष्ठ, बाबुरामको अग्रता - Machhapuchhre FM
कांग्रेसको बैठक बोलाउने तयारी,विधान अनुरुप नचलेको भन्दै पार्टी सभापतिको आलोचना ।
अब चार महिनाभित्रै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी
काठमाडौंबाट मतगणना अपडेट लिंदै भट्टराई र श्रेष्ठ, बाबुरामको अग्रता
गोरखा, २२ मंसिर । कडा प्रतिष्पर्धा भइरहेको गोर्खा क्षेत्र नं. २ का प्रतिष्पर्धीहरु नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला काठमाडौंमा छन् । भट्टराई र श्रेष्ठले काठमाडौंबाट मतगणनाको जानकारी लिइरहेका छन् ।
निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने निश्चित भएपछि मात्रै उनीहरुमध्ये एक गोरखा जानेछन् । गोर्खाका अन्य उम्मेदवाहरु भने मतगणना स्थलमै रहेका छन् ।
पछिल्लो अपडेटअनुसार भट्टराई २०७ मतले अगाडि छन् । ७ हजार ६ सय २२ मत गनिसक्दा भट्टराईले ३ हजार ६ सय ७३ मत ल्याएका छन् भने श्रेष्ठले ३ हजार ४ सय ६६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
क्षेत्र नं. २ मा ६० हजार एक सय ९ मत खसेको थियो । हाल गोरखा नगरपालिकाको ८ देखि १४ नम्बर वडा, पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक, अजिरकोट र सुलिकोट गाउँपालिका क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । यी ५ वटै स्थानीय तहको मत मिसाएर गणना गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो मतगणना नतिजाअनुसार गोरखामा नयाँ शक्तिका प्रदेशसभाका उम्मेदवार हरिशरण आचार्यले पनि अग्रता हासिल गरिरहेका छन् । आचार्यले ३९१९ मत ल्याउँदा वामगठबन्धनकी कमला नहर्किले ३४८१ मत प्राप्त गरेकी छन् । हालसम्म ७८५८ मत गनिएको छ । अन्य स्थानमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको अग्रता रहेको छ ।
रहस्य नखुलेका विश्वका रोचक वस्तुहरू... --